Didy faha 2 : "Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao ….,aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy." | FJKM Amboniloha
Didy faha 2 : “Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao …, aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy.”
Ny sampy no raràna eto amin’ity didy faharoa ity. Ny sampy dia zavatra foronina mba ho hitamaso ka hivavahana na hianteherana sy hitokiana. Isa 44:9-19 Manomeza ohatra.
Tsy ny fanaovana sary sikotra na famoronana fitaovana sy firavaka no halan’Andriamanitra fa ny fidinan’ny olona ho amban’ireny ka hivavaka sy hiankohoka ary hiantehatra amin’ny asan-tana’olona, eny fa na dia asan-tanan’Andriamanitra toy ny masoandro amam-bolana sy ny kintana aza.
Indraindray dia heverin’ny olona fa sy hivavahana izy ireny fa hatao ho mpitondra teny na mpanelanelana ny olona amin’Andriamanitra. Tsy azo atao mihitsy izany ary tena fitaka be vava hamosavian’I satana antsika olombelona.
Tokana ihany no mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona dia Jesoa Krisy I Timoty 2:5.
Vitanao tsara ny manaja ity didy faharoa ity. Sa ahoana?